तपाइँको सामाजिक पुनः सुरु गर्नुहोस् Martech Zone
हाम्रो उद्योग मा, एक सामाजिक बायोडाटा आवश्यक छ। यदि तपाइँ सोशल मिडियामा काम खोज्ने उम्मेदवार हुनुहुन्छ भने, तपाइँसँग उत्तम नेटवर्क र अनलाइन उपस्थिति छ। यदि तपाइँ सर्च ईन्जिन अनुकूलनमा रोजगार खोज्दै उम्मेद्वार हुनुहुन्छ भने, म तपाईलाई खोज परिणाममा फेला पार्न अझ सक्षम हुनेछु। यदि तपाईं एक सामग्री मार्केटिंग कामको लागि खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने, म तपाईंको ब्लगमा केही लोकप्रिय सामग्री हेर्न सक्षम हुनेछ।
को लागी एक सामाजिक पुनःसुरु अहिले हाम्रो उद्योग भन्दा पर जाँदै छ। निगमहरू र भर्तीकर्ताहरूले सामाजिक मिडिया साइटहरू र खोज इञ्जिनहरूको प्रयोग गरिरहेका छन् - उम्मेदवारहरूको समीक्षा गर्न होइन - तर तिनीहरूलाई फेला पार्नको लागि। के तिनीहरूले तिमीलाई भेट्न सक्छन्? के तपाईं आफ्नो व्यक्तिगत ब्रान्डको लागि अनलाइन अधिकार निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ?
डिजिटल सामाजिक रेजुमेहरू परम्परागत पुनःसुरुमा आधुनिक लिन्छन्। जबकि तपाईले निश्चित रूपमा तपाईको कामको अनुभव र शिक्षा तपाईको सामाजिक पुनःसुरुमा समावेश गर्नुपर्दछ, तपाई सम्भावित रोजगारदातालाई प्रदान गर्नुभएको जानकारी विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ कामको नमूना, प्रासंगिक लिंक र अधिक समावेश गर्न।
टैग: अख्तियारजागीरको खोजिभर्तीभर्तीसामाजिक पुनःसुरु
मन्ड्रिल: तपाईको अनुप्रयोगको लागि ईमेल प्लेटफर्म
जनवरी १, २०१ 25 १२::2013 अपराह्न
इन्फोग्राफिकमा कमाल पोस्ट!